आजभोलि किन गइरहन्छ झ्याप्प-झ्याप्प बिजुली ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार आजभोलि किन गइरहन्छ झ्याप्प-झ्याप्प बिजुली ?
आजभोलि किन गइरहन्छ झ्याप्प-झ्याप्प बिजुली ?
२०७७, १० बैशाख बुधबार २२:१५
केही समयदेखि नेपालभरि झ्याप्प झ्याप्प बिजुली गइरहने र केही समयपछि आउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । केही ठाउँमा भने घन्टौंसम्म पनि आउँदैन । यसले गर्दा आमनागरिकको दैनिकीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । लकडाउनमा घरमै बसेर काम गर्नेहरु र अत्यावश्यक सेवा दिनेहरु पनि पटक–पटक बिजुली जाँदा हैरान भएका छन्, काम प्रभावित भएको छ ।
यतिबेला मुलुक लकडाउनमा छ । देशभरका उद्योग प्रतिष्ठान, कलकारखाना, कार्यालय बन्द छन् । यस्तो बेला बत्ती नजानुपर्ने हो । तर, किन छिनछिनमा बिजुली गइरहन्छ भन्ने विषयमा धेरै अनभिज्ञ छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सूचना अधिकारी प्रबल अधिकारीले बिद्युत किन गइरहन्छ भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैलाई जानकारी गराउनुभएकाे छ ।
उहाँले प्राधिकरणले बिजुली नपुगेर काट्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभएकाे छ । प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भन्नुभएको छ, ‘विद्युतको परिमाण त हामीसँग यथेष्ट छ बरु प्रतिकूल मैसमले ग्राहकको लोड विच्छेद हुँदा विद्युत गृहले पानी नै खेर फाल्नु परिरहेको छ । आखिर पानी त बिजुली नै हो नि ।’
उहाँले अहिले हुरीबतासको मौसम भएकाले चट्याङ पर्ने, असिनापानीले समेत विद्युत प्रणालीलाई असर गर्ने गरेको जानकारी दिनुभएकाे छ । उहाँले लकडाउनको समयमा सकभर कतै पनि बिजुली कटौती नहोस् भनेर कर्मचारीहरु फिल्डमै रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
‘मौसमका कारण यी महिनाहरुमा विद्युत प्रणालीमा गडबड भइ सेवा प्रभावित भइरहेको कुरालाई हामी स्वीकार्छाैँ । कोरोना भाइरसको कारण आदेश गरिएकाे लकडाउनमा समेत हाम्रा प्राविधिक टोलीहरु फिल्डमा खटिरहनुभएको छ । विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा सकेसम्म चाँडो मर्मत सम्भार गरी सेवा सुरु गर्न प्राधिकरण हरसम्भव किसिमले प्रयत्नशील रहेको जानकारी हजुरहरुसमक्ष पुर्‍याउन पनि यो स्ट्याटस लेख्नुपरेको ब्यहोरा निवेदन गर्दछु’, प्रवक्ता अधिकारीले फेसबुक पेजमा लेख्नुभएको छ । Source: news24nepal.tv
Previous articleकुवेतमा थप पाँच जना नेपाली कामदारमा कोरोना संक्रमण देखियो
Next articleएसईई कहिले ?